၁၁ တန်း ဘာလဲ? ဘယ်တော့လဲ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ၁၁ တန်း ဘာလဲ? ဘယ်တော့လဲ?
၁၁ တန်း ဘာလဲ? ဘယ်တော့လဲ?
Posted by Burma on Oct 28, 2011 in Copy/Paste | 12 comments
ခုတလော ကျောင်းသားတွေ ပါးစပ်ထဲ ပြောပြောနေတဲ့ ၁၁ တန်းကို ကျွန်တော် ဟိုကျန်ခဲ့တဲ့ လေးရက်လောက်ကမှသိပါတယ် . (၉ တန်းကျောင်းသားဖြစ်ပြီး). . . ကျွန်တော့ မှာ ခုနှစ်တန်း ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိတော့ ကျွန်တော်လွတ်ရင်တောင် ကျွန်တော့ ညီမလေး မလွတ်မှာဆိုတော့ ကျွန်တော် စိတ်ပူမိပါသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နေပြီး ဒီနေ့ 28 ရက်နေ့ ကျွန်တော့ဆရာမပြောတာ တော့ အခြေခံပညာရေးမှာ အစည်းအဝေးလုပ်တယ်လို့ သိရတယ်ဗျ။ ၀န်ကြီးက ၁၁ တန်းကို အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ချင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာနိုင်ငံ က ကျောင်းသားတွေ ၁၀ တန်းအောင်ပြီး လို့ တကသိုလ်တက်ပြီး နိုင်ငံခြားသွားကြရင် ဟိုမှာ ၁၁ တန်းပြန်တက်ကြရလို့ အဲဒိလိုမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် ၁၁ တန်း သင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ အာဆီယံ စံနှုန်းမှီအောင်လုပ်နေတာ လို့လဲသိရပါတယ်။ မူလတန်းကို ငါးတန်းအထိ သတ်မှတ်ပြီး အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာ မူလတန်း ပညာမသင်တော့ပဲ မူလတန်းကို မူလတန်းကျောင်းသီးသန့် လုပ်မှာလို့လဲသိရပါတယ်။ မူလတန်6းနှစ် ၊ အလယ်တန်3းနှစ် ၊ အထက်တန်3းနှစ် System ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒိအကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဆရာမတွေကတော့ မလုပ်ချင်လို့ အတင်းငြင်းကြပေမဲ့ ၀န်ကြီးတို့ကတော့ အကောာင်အထည် အမြန်ဖော်ချင်နေကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လိုငွေ ၊ ဆရာမ ၊ ဆရာမများအတွက် သင်ရိုးညွှန်တမ်း ၊ လခ ဒါတွေ အားလုံး လိုအပ်တာတွေကို စတင်တွက်ချက်နေပြီဖြစ်ပြီး 2015 လောက်မှသာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလောလောဆယ်တော့ ကျောင်းတွေမှာ အဂ်လိပ်လိုတွေပြောရမယ် တွေ လုပ်နေလို့ ဆရာမတွေလဲ သီတင်းကျွတ် ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းးတွေ တက်ကြရပြီး ခလေးတွေကိုလဲ အင်္ဂလိပ်စကားပြော စာအုပ်တွေပေးပြီး အဂ်လိပ်လိုတွေကိုပဲပြောခိုင်းနေပါတယ်။ ဘယ်သူမှတော့ သိပ်မပြောကြဘူး။ ;D ကျွန်တော့ရဲ့ မဟာကျောင်းကြီးမှာတော့ မပြောရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော့ရဲ့ အရင် အလယ်တန်းကျောင်း အခု ကျွန်တော့ ညီမနေတဲ့ကျောင်းမှာတော့ စနေပါပြီ။
အင်္ဂလိပ်လို တွေ ပြောရမယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ် ။
ငါ့ညီတို့ တတွေ အင်းဂလိစာ ၊ စကားပြော ထူးရှယ် တိုးတက်လာတော့မှာ မြင်နေရလို့ ပါ ။
ကိုယ်တို့ တွေ တုန်းကတော့ ဆရာ/မ တွေ က ထူးချွန်စေချင်လို့ သေချာသင်ပေးခဲ့ပေမယ့်
မသင်လဲ ဘာမှ မဖြစ်ဆိုသလို နေခဲ့တော့ ၊ ယနေ့ လက်ရှိအချိန်မှာမှ အင်းဂလိ ကို ပြန်လေ့လာသင်ယူနေရတာမို့ ၊ “အင်္ဂလိပ်လို ပြောရမယ်” ဆိုတဲ့ အချက်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်မိပါတယ် ။
♦ ဟုတ်ပါ့.. ကောင်းတာကကောင်းပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကတော့ ရှက်သလို လို ရွံ့သလိုလို ဖြစ်နေကြတယ် ၊ တစ်ချို့လဲ လှောင်နေသလိုလို ဟီလာထ နေကြတာကတော့ဆိုးတယ်.. ကျောင်းမှာ Assembly စီတော့မယ်ဆိုရင် ရုံးခန်းက it’s assembly time,quick..quick!! လို့ပြောတယ်တဲ့.. ကျောင်းသားတွေက အဲဒါကို ထိုင်ရယ်နေကြတယ်တဲ့
အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမယ် ဆိုတော့ ကောင်းပါတယ်။ မြန်မာတွေက သူများပြောတာကို နားလည်ပီး
ကိုပြန်ပြောကမယ်ဆို အထစ်အထစ်နဲ့ ။ ကျောင်းမှာကတဲက အဲဒီလို လေ့ကျင့် ပေးရင်တော့
နောက်မျိုးဆက်သစ် လေးတွေအတွက် ကောင်းတာပေါ့။
” ဆရာမတွေကတော့ မလုပ်ချင်လို့ အတင်းငြင်းကြပေမဲ့ ”
ဘာဖြစ်လို့ ငြင်းရတာလဲ ။
နိုင်ငံတကာ Standard က Year 12 ပြီးမှ Uni တက်ရတာ ။
♦ မိဘတွေကလဲ တစ်နှစ်ကြီးတောင် ထပ်တက်ရမှာဆိုတော့ စိတ်ညစ်ကြသလို ၊ ဆရာမတွေက ဘာလို့ ငြင်းကြတာလဲ တော့ ကျွန်တော်လဲ မသိဖူးဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ တက်ချင်တယ်။
I say Mg Burma, I amacat and you are not. You are notacat but I am. You and I either must beacat or both shall not be cat. As you are notacat, Cat is also not you but I amacat since cat is me. Neither of us can say we are both cat and human because cat is cat, human is human. Do ya… agree? :cool:
♦ I say Mr.Cat, i got headache after i have finished reading your comment. I know you areacat and i am notacat. i am notacat but you are. You and I either must beacat or both shall not beacat. As i am notacat, Cat is also not me but you areacat since cat is you. Neither of us can say we are both cat and human because cat is cat, human is human. i don’t know that i should agree or not. Thanks
အီးလို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းပါ့ဗျာ
ကောင်းတယ် ထင်တာပဲ ကျောင်းတွေမှာ အင်္ဂလိပ်လို တင်မကဘူး တရုတ်လိုပါ ပြောခိုင်းရမယ် ဒါမှ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ နိုင်ငံခြား တန်းပြီး ထွက်သွားနိုင်မှာ ဘာပဲ ပြောပြော အဆင့်တော့ မြင့်သွားတာပေါ့။ အပြင်ကျောင်းတွေမှာ တနေ့တနေ့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောပြီး သင်နေရတဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ အချိန်နဲ့ အမျှ ကွာခြားသွားတာတွေ မရှိတော့ဘူးပေါ့။ အားလုံး တပြေးညီ တိုးတက်ကြမယ် ဆိုရင် ကြိုဆိုရမှာပေါကွယ်။
ဆရာမတွေ အချင်းချင်းဆို ကိုရီးယားလို ပြောကြမယ် မယုံရင် ဆရာမတွေ သီးသန့် စကားပြောရင် ခိုးပြီး နားထောင်ကြည့် သူတို့ ကိုရီးယားလို ပြောနေတာ သိလိမ့်မယ်။
ကျောင်းတွေ မှာ ကျောင်းသားတွေ ကို အင်္ဂလိပ်လိုပြော ခိုင်းမယ်ဆို ရင်လည်း သူငယ်တန်းကတည်းက
စပြီး လေ့ ကျင့် ပေးရင် ကောင်းမယ် ။ဆရာမတွေကိုလည်းသေသေချုာချာ အ၇င် လေ့ ကျင့် ပေးပြီးမှ
စတာ ပို ကောင်းမယ် ထင်တယ် ။စနစ်တကျလေးနဲ့ ပေါ .။အတန်းထဲ မှာ ဗမာလို ပြောရင် ဒဏ်ကြေးဆောင် ရမယ် ..စသည်ဖြင့် ပေါ .။တိုးတက် တဲ ပညာရေ့းလမ်းကြောင်းကို ဦးတည်နေတာဆိုတော့ (၁၁)တန်းထားပေးတာလ ည်းသိပ်ကောင်းပါတယ်။
Uni Level ကို မတက်ခင် အ၇ည်အချင်းမှီအောင် ပြင်ဆင်နိူင်တာ မို့ 
Well qualified products တွေကို တက္ကသိုလ် အသီးသီး က အခုထက် ပို ပြီး
မွေးထုတ်လာနိုင်၇င် အကောင်းဆုံးပေါ့ ။ ပြောင်းလဲလာ မယ့် ပညာေ၇းစနစ်သစ်ကို ထောက် ခံပါတယ်။